Mụta ka esi azụ ahịa na 2021 wee rite uru site na Daily Signals Forex Free 🥇
PDF azụmaahịa Forex
Obere akpa Cryptocurrency kacha mma
Saịtị Crypto kacha mma
Onye Kasị Mma Forex Signal Provider
Ahia ahia nke uwa
oge obula, ebe obula
Jikọọ na Telegram anyị maka akara ngosi efu!
Crypto kwa izu
BTC, ETH, XRP & LTC Nka na ụzụ
Top ore ahia
78.77% nke akaụntụ CFD na-ere ahịa na-efufu ego
Ruo 10 ziri ezi, akara ngosi bara uru kwa ụbọchị
Ọ dị mfe ịnweta Forex na Crypto Signals
Nyocha gbasara teknụzụ kwa ụbọchị yana ndụmọdụ ahịa
Obodo nke karịrị ndị ahịa 15,000 na-arụsi ọrụ ike
Ihe ngosi oge, ihe niile site na Telegram!
Jikọọ Group Telegram
Ozugbo mata na email gị
N'etiti 4-5 ziri ezi, ihe nrịba ama bara uru kwa ụbọchị!
Ndị ọkachamara Forex
Ọlaedo (XAUUSD) N'ịga n'ihu, na -eche ihu na ọkwa 1,760
Fraịde, Ọktọba 1, 2021
Ọkwa Nguzogide Isi: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000 Isi ọkwa nkwado: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 Gold (XAUUSD) Ogologo oge: RangingGold (XAUUSD) anọwo n'akụkụ na-aga n'okpuru nkwụsị elu na $ 1,830. Mmegharị akụkụ ahụ na -aga n'ihu kemgbe ọnwa Julaị. Na Septemba 2, ndị na -azụ ahịa nyochaghachiri nguzogide dị n'elu na $ 1,830 wee chụpụ ha. Ahịa ahụ nọ na […]
Dollar na -eme ka uru nweta, nlebara anya na -agbanwe na Euro
Tọzdee, Septemba 30, 2021
Ka Dollar na-agbari mmụba nke nkwado izu a, ịre anya abanyela na Euro, ọkachasị n'ahịa ahịa. Ka ọ dị ugbu a, mmetụta ihe egwu na -abawanye na -enyere ego ngwa ahịa na Sterling aka, ebe dollar Australia na -ebute ngwugwu ahụ. N'ọnọdụ ihe ize ndụ kwụsiri ike, yen na Swiss franc na -adịkarị ike. Ọnụ ọgụgụ enweghị ọrụ na Eurozone […]
AUDUSD gara n'ihu na -ebili n'etiti ọnọdụ ahịa adịghị mma
Ntụle ọnụ ahịa AUDUSD-Septemba 30 N'oge nnọkọ ndị America, AUDUSD nwetara traction wee rute 0.7257, ọkwa ọhụrụ dị elu kwa ụbọchị na-agbada site na mbelata dollar US. DXY na -agbada pasent 0.20, na -aka akara oge mbụ ọ dara mgbe ụbọchị anọ nke uru. N'agbanyeghị njikọta US siri ike na -eweta na enweghị nkwekọrịta US […]
Dogecoin (DOGE) na -agbago karịa nkwado $ 0.20, mbelata na $ 0.16 nwere ike yie
Ọkwa Nguzogide Isi: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47Kọkwa Nkwado Isi: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE/USD Ogologo oge: Ọnụ ahịa BearishDogecoin (DOGE) adaala na $ 0.20 mgbe ọ gbadara ala gara aga na $ 0.21. Taa, crypto na-agbago n'elu $ 0.20 nkwado. Tupu ọdịda ọnụahịa na -adịbeghị anya, ọnụahịa DOGE mebiri n'okpuru nkwado $ 0.21, nwalere ya tupu ịmaliteghachi downtrend. N'oge a, […]
Ego dijitalụ bara uru maka akụ na ụba ụwa: mkpesa BIS
Akụkọ ọhụrụ nke Bank of International Settlements (BIS) na otu ụlọ akụ etiti na -ekwupụta na ego dijitalụ nwere ike ịkwalite mmezi ngwa ngwa yana nnyefe dị ọnụ ala karịa. Ihe dị ka izu abụọ gara aga, onye isi ụlọ akụ Innovation nke Bank of International Settlements (BIS), Benoît Cœuré, kwupụtara na ụlọ akụ etiti ga -eburu ikike na […]
Chart nke Ubochi
Na-atụ anya ahịa
USDJPY Rally na -aga n'ihu ka ọ na -enwetakwu oge adịghị ike
Nyocha USDJPY - Ọnụ ahịa na -aga n'ihu na -agbago elu ka oge na -abawanye ngagharị iwe USDJPY na -aga n'ihu ka oke oke egwu na -abawanye. Ndị na -azụ ahịa nwetara ọkwa a mgbe ọkụ kandụl na -eri nri dị nso na isi igodo 109.100. Oke ehi mgbe ahụ mụbara nrụgide, ahịa na -aga n'ihu na -agbago elu. Agbanyeghị, atọrọ ọnụ ka ọ ga -eru […]
Ụlọ ọrụ na -egwupụta mkpụrụ ego Bitcoin na US nwere ike irite uru na mmachibido iwu China ọhụrụ: Onye isi obodo Florida
Onye isi obodo Miami, Florida -Francis Suarez -kwenyere na mwakpo Bitcoin (BTC) na cryptocurrency nke gọọmentị China bụ ohere dị mkpa maka ahịa ndị America irite uru na ya. Onye isi obodo, onye na -arụ ọrụ ugbu a n'iwu obodo ya ka ọ bụrụ ebe nchekwa Bitcoin, gwara Bloomberg na: “Oge mgbanwe bụ ugbu a. Ọ na -emepụta ihe ịtụnanya […]
CYCE-Token na-agbanwe egwuregwu na-eme ka mmetụta ụwa dị mma
Ebe a na-emetụ aka na CYCE, akara ngosi ERC-20 nke ga-agbanwe nke ukwuu n'ụzọ anyị si eche maka cryptocurrency. Ọ bụ azụmahịa azụmaahịa Turkey nke Crypto Carbon Energy nke mbụ blockchain, mana ọ na -apụ n'anya. N'ibum n'obi ịlụso Mgbanwe ihu igwe ụwa, CYCE chọrọ ịgbanwe mgbanwe nke ume ọhụrụ site na […]
Ọnụahịa Uniswap (UNIUSD): Bullish Movement Triggers na $ 17 Ọkwa, nwere ike ịga n'ihu na $ 30
Ntụle Ahịa Uniswap - Septemba 30 Ọnụahịa ahụ nwere ike banye na ọkwa nguzogide nke $ 26 wee bawanye na ọkwa nguzogide nke $ 30 na $ 37. Enweghi ike ịbanye n'ọkwa nguzogide nke $ 26 nke oke ehi nwere ike bute ahịa ahịa ma ọ bụ ntụgharị ntụgharị na ọkwa nkwado na $ 21, $ 17 na $ 14. Ahịa UNI/USD […]
Kaadị ego dị elu
Nyochaa Kaadị Ego Ego: Etu ị ga -esi lelee AdvCash Limit
Advanced Cash, nke a na -ebelata dị ka AdvCash, bụ ọgbakọ ịkwụ ụgwọ zuru oke nke malitere na 2014. Kọmịshọna Ego Ego Mba Nile nke Belize kwadoro usoro nzipu ego a. Ọzọkwa, sistemụ a na -ejikọkwa na Wave Crest Holdings Limited, ama ama na obodo kaadị debit Bitcoin. Ikpo okwu a na -enye ọrụ dị mkpa maka onye ọ bụla metụtara na mebere […]
Were ahia na ahia
Ihe kachasị mma na SIGNALS
soro anyị enweghị akara Forex na cryptocurrencies, ngwaahịa na indices
Detuo ndị ahịa kacha mma
Jidere ohere ndị ahịa na kacha mma Forex Broka
Mụta ahia Forex Strategies na News
Forex mgbupụ &
Nduzi Kachasị Elu nke Forex Broka
Obi abụọ adịghị ya, onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ahịa Forex. Ma dị ka onye mbido, ị ghọtara ọrụ ndị na-ere ahịa na-arụ? Gụọ nke anyị Ntuziaka Forex brokers ebe a mara ọrụ mbu nke onye ahia ahia Forex.
A ghaghị ịzụ ọtụtụ ahịa dị ka ihe ọhụrụ na Forex ahịa, mana (ọzọ), ịchọrọ usoro ịzụ ahịa kachasị mma iji rụọ ọrụ gị. Ya kpatara peeji anyi na-akowa usoro kachasị mma maka ịzụ ahịa maka ndị mbido.
Debe akwukwo ahia
Akwụkwọ ahịa a na-azụ ahịa bụ naanị ndekọ nke ọrụ ahịa gị niile. Dịka, akwụkwọ akụkọ na-enye ndị ọrụ ọ bụla siri ike mkpa iji nyochaa onwe ha n'ụzọ ziri ezi. Ma olee uru idebe akwụkwọ akụkọ dị iche? Ka anyị gwa gị ihe niile ị chọrọ ịma Ebe a.
Gụ Ọnụ Mmasị
Mmetụta ọmụrụ nwa na-emetụta ahịa azụmaahịa n'ụzọ dị mkpa. Enwere ike ịme mgbanwe ndị a site na otu n'ime etiti etiti etiti mba ụwa. Mgbanwe ndị ahụ na-emetụta ndị ahịa n'ahịa ozugbo, yabụ, ịghọta etu esi eme yana ịkọgharị ihe ndị a ga-abụ nke mbụ iji nweta uru dị elu.
Mezue Purzụta Gị
Ga nke Ọma Site Day One
Mụta ahia Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ahia n'ịntanetị, ị na-na-na-na-nri ebe. Ebe nrụọrụ weebụ anyị ga-eji ngwá ọrụ niile achọrọ gị kee gị iji nweta ọrụ ịzụ ahịa gị n'ụkwụ aka nri.
Anyị na-enye nduzi zuru oke na azụmaahịa niile - dịka otu esi arụ ọrụ ọtụtụ ijeri paụnd Forex, ihe CFD bụ na ihe kpatara ha ji dị oke mkpa maka ebumnuche itinye ego gị ogologo oge, itinye ego, mgbasa, iwu ahịa, yana ihe ọ bụla ọzọ anyị chere na ị kwesịrị ịma tupu ịmalite itinye ego nke aka gị.
N'ụzọ dị oke mkpa, mgbe ị na-etinye oge dị mkpa iji na-agagharị na ọtụtụ ngwaọrụ agụmakwụkwọ anyị, ị ga-ahapụ usoro anyị na nkà na ihe ọmụma achọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịgbalị ahịa ịntanetị.
Dingzụ ahia maka ndị mbido: Kedu ka azụmaahịa ọnlaịnụ si arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ị tinyebeghị otu azụmahịa na ndụ gị, ọ dị mkpa na ị maara ihe ị na-eme tupu ịhapụ ego gị. A sị ka e kwuwe, ahia ntanetị na-abịa na plethora nke ihe ize ndụ - ọtụtụ n'ime ha nwere ike igbochi ike gị ịme uru na-agbanwe agbanwe. Ka o siri dị, ka anyị bido site n'inweta nyocha ogo 360 maka etu usoro azụmaahịa na njedebe si aga.
Họrọ onye na-ere ahịa na ntanetị
Iji zụọ ahịa n'ịntanetị, ị ga-eji onye na-ere ahịa. Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị ịchọrọ ịkwado ịzụta ma ree iwu site na ekwentị na onye na-azụ ahịa ọdịnala.
Kama nke ahụ, a na-eme ihe niile ugbu a n'ịntanetị. N'ezie, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịzụ ahịa site na nkasi obi nke ụlọ gị, mana ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ugbu a na-enye ngwa ahịa azụmaahịa zuru oke. Dịka, ị nwere ike ịzụ ahịa ugbu a na-agagharị.
Site na nke a, enwere ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ndị ahịa. N'otu aka, nke a bara uru nke ukwuu site na gị dị ka onye na-azụ ahịa, dịka njupụta nke nyiwe pụtara na ndị na-ere ahịa ga-enwerịrị ike iji gbochie asọmpi ahụ.
Nke a nwere ike ịbịa n'ụdị belata azụmaahịa na mgbasawanye siri ike, ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ dịka 'Detuo ahia'. N'aka nke ọzọ, nke a na-eme ka o sie ike ịmara nke ịzụ ahịa ịntanetị ịbanye na ya.
Kedu otu ị ga - esi họrọ Platform Trading Online?
Iji nyere gị aka n'ụzọ, anyị edepụtara ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ịkwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa n'ịntanetị.
Iji nye ndị ọrụ ịzụ ahịa n'ịntanetị maka ndị ahịa na-ere ahịa dabere na UK, ndị na-ere ahịa ga-achịkwa ya na Financial Conduct Authority (FCA). Dịka, nke a bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe mgbe a bịara n'ịhọrọ ikpo okwu ọhụrụ.
N'ọtụtụ oge, onye na-ere ahịa n'ịntanetị ga-edepụta nọmba ndebanye aha FCA, nke ị nwere ike ịdebanye aka na weebụsaịtị webụsaịtị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike ịchọ aha onye na-ere ahịa na ntanetị site na ndekọ FCA. Mee elu mee ala, ọ bụrụ na onye na-ere ahia anaghị enweta akwụkwọ ikike FCA, ị kwesịrị izere ikpo okwu n'ọnọdụ niile.
Kwesịrị ịtụle usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ iji ma a bịa n'ịkwụnye ego na iwepụ ego. Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị kredit, ebe ọ bụ na nkwụnye ego na-abụkarị ozigbo.
Ọzọkwa, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere iji obere akpa dị ka PayPal ma ọ bụ Skrill, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-akwado nnyefe ego. Agbanyeghị na nke a na-enyekarị ohere ohere dị elu, inyefe ụlọ akụ bụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị nwayọ.
Es esgwọ na Mgbasa
Ga-akwụ ụgwọ ego nke ụdị ụfọdụ iji jiri usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa ego. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ọrụ na-agbanwe agbanwe, nke bụ pasent nke ego ị na-azụ. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ n ’itinye azụmaahịa ruru £ 4,000, na onye na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ 0.2% na ọrụ, ị ga - akwụ ụgwọ £ 8 ụgwọ.
N'elu ọrụ, ịkwesịrị ịtụle mgbasa. Nke a bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'ịzụta' na 'ere'. Ọ bụrụ na mgbasa ahụ dị oke elu, mgbe ahụ ọ ga-enwe mmetụta kpọmkwem na ike gị ịme uru na-agbanwe agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mgbasa ahụ ruru pasent nke ụwa n'ezie 1%, ịkwesịrị ịme opekata mpe 1% iji mebie ọbụna.
Ngwá Ọrụ Ego
Ikwesiri ime ntughari uche banyere onu ogugu, na udiri, ngwa ego nke ndi na ahia ahia. N'ọtụtụ ikpe, ntanetị ntanetị ga-ekpuchi Forex na CFDs. Banyere nke mbụ, nke a bụ ebe ịzụrụ na ire ego, na-ele anya na ị ga-erite obere mmegharị ọnụahịa.
N'ihe banyere CFDs (nkwekọrịta-maka-iche), nke a na-enye gị ohere ịkọ nkọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klas ọ bụla bara uru, na-enweghị mkpa ịnweta akụ na-akpata. Iji maa atụ, CFDs na - enye gị ohere ịzụ ahịa site na ebuka na mbak, ọla edo, mmanụ, gas, akara ngosi ahịa, ọmụrụ nwa, ọdịnihu, yana mkpuchi.
Tools Ngwa ahia
Kachasị mma site na iji onye na-ere ahịa nke na-emesi ike na njirimara teknụzụ. Ngwá ọrụ ndị a na-enye gị ohere inyocha usoro ọnụahịa nke akụkọ ihe mere eme n'okwu dị elu. N'ime ime nke a, ị na-anọ ohere kachasị mma ị ga-atụle ebe ntụzịaka ọdịmma ị họọrọ ga-aga.
Ndị na-egosi ihe ndị a maara nke ọma na-agụnye oscillators stochastic, nkezi na-agagharị (MA), akara ngosi ike (RSI), na ndị agha bollinger. Mee elu mee ala, ị kwesịrị ị na-ahọrọ online trading nyiwe na-enye ọtụtụ teknuzu egosi.
Tonweta ngwá ọrụ nyocha bụkwa ihe dị mkpa ịchọrọ ịkwado maka mgbe ị na-ahọrọ usoro ịzụ ahịa ọhụrụ. Nke a kwesịrị ịgụnye mmelite akụkọ oge ọ nwere ike ịmetụta otu akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ọzọkwa, ọ bakwara uru mgbe ndị na-ere ahịa nwere ngalaba nyocha a raara nye. Nke a bụ ebe ndị ahịa azụmaahịa na-ebipụta echiche ha ebe otu akụ nwere ike ịkwaga n'ahịa na obere oge.
Mepee Akaụntụ Na Platform Trading Online
Ozugbo ị họrọla onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-egbo mkpa gị, ị ga-emepe emepe akaụntụ. Usoro ndebanye aha anaghị ewe karịa minit 5-10. N'ikpeazụ, onye na-ere ahia kwesịrị ịma onye ị bụ, yana ma ị nweghị ahụmịhe achọrọ iji zụọ ahịa n'ịntanetị. Nke a bụ iji hụ na ikpo okwu a ka na-agbaso usoro iwu nke FCA gosipụtara.
Nke a bụ ozi ị ga - achọ ịbanye mgbe ị mepee akaụntụ na saịtị azụmaahịa.
✔️ Ozi nkeonwe
Ikwesiri itinye ozi nkeonwe gị. Nke a ga-agụnye aha gị, adreesị ụlọ, ụbọchị ọmụmụ, nọmba mkpuchi mba, na nkọwa kọntaktị gị.
✔️ Ozi gbasara Ọrụ
Na ore ahia mkpa ịmata ọrụ gị ọnọdụ na gị kwa afọ ego mgbe ụtụ isi.
✔️ Ego Ego
Ikwesiri ime ka onye na-ere ahia ahia mara ihe onu ahia gi bara uru, ma ma i bu onye ahia ahia ma obu ulo oru.
✔️ Ahụmịhe azụmaahịa gara aga
Na ore ahia ga-ajụ gị ajụjụ metụtara gị tupu trading ahụmahụ. Nke a ga-agụnye ụdị akụ ị gbanwere n'oge gara aga, yana oke azụmaahịa.
Iji nọgide na-agbaso iwu na-akwadoghị ego, iwu niile FCA na-achịkwa nyiwe azụmaahịa ga-enyocha njirimara gị. Usoro a pere mpe ma choro ka ị bulite otu NJ gị nyere gị gọọmentị, yana ihe akaebe nke adreesị.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere itinye ego tupu usoro nkwenye ahụ zuru ezu, ị gaghị enwe ike iwepụ ego ruo mgbe ekwenyela akwụkwọ gị. Ka o siri dị, ọ kachasị mma ịnweta usoro KYC (Mara Onye Ahịa Gị) ozugbo ị mepee akaụntụ ahụ.
N'ihe banyere inye ego maka ụlọ ahịa gị, a ga-enye gị ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na nke a ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, anyị edepụtara usoro nkwụnye ego na ụzọ nkwụnye ego dị n'okpuru.
🥇 Debit na kaadị akwụmụgwọ
Kwụnye ego site na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ na-abụkarị na a na-akwụnye ego ahụ ozugbo. Lelee ụgwọ - ọkachasị ọ bụrụ n'iji kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụ ezie na onye na-ere ahia nwere ike ọ gaghị akwụ gị ụgwọ ọ bụla site na ịsị, onye na-ewepụta ihe na kredit kaadị nwere ike klas nkwụnye ego ahụ dịka ọganihu ego. Ọ bụrụ na ọ mere, nke a nwere ike ịdọrọ ego nke 3%, yana ọmụrụ nwa etinyere ozugbo.
Transfer Nyefee ego
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke usoro ntanetị ntanetị ga-anabata nnyefe ụlọ akụ. Usoro dị nwayọ nwayọ karịa ịkwụ ụgwọ debit / kaadị akwụmụgwọ, agbanyeghị na oke ịgba na-adịkarị elu. Ọ bụrụ na emere nkwụnye ego ahụ site na UK Kwụ Ọkwụ mentsgwọ, enwere ike itinye ego ahụ n'otu ụbọchị.
Agbanyeghi na enweghi ego kariri kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ, ọtụtụ ndị na-agbanwe ọhụụ na-anabatazi e-wallets. Nke a gụnyere ọkacha mmasị nke PayPal, Skrill, na Neteller. E-Wallet nkwụnye ego abụghị naanị n'efu, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ha na-enye gị ohere ịdọrọ ego gị n'oge kachasị ọsọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịba uru site na ọtụtụ ijeri paụnd forex ohere, mgbe ahụ ị ga-azụ ma na-ere ego. Isi okwu bụ ị nweta uru dịka na oge mgbanwe mgbanwe ego na-aga.
Dị ka ndị dị otú a, ị ga-azụ ahịa 'ụzọ' Forex, nke mejupụtara ego abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa paụda na euro, mgbe ahụ ị ga-azụ ahịa GBP / EUR.
Site na nke a, ụfọdụ ndị na-ere ahịa ga-edepụta ihe karịrị 100 ụzọ abụọ ego abụọ. A na-ekewa ụzọ abụọ ego a ụzọ atọ - majors, umuaka, na exotics.
Dị ka aha na-egosi, isi na abụọ mejupụtara abụọ 'isi' ego. Nke a ga-agụnye ego sitere na nnukwu akụ na ụba ụwa, dị ka dollar US, paụnd Britain, euro, yen yen Japan, na Switzerland franc.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ịzụ ahịa azụmaahịa, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ịrapara na isi ụzọ abụọ. Nke a bụ n'ihi na ndị isi na-ezute ọkwa volatility dị ala, gbasaa gbasaa, na ikpo mmiri.
Mụ obere ga-enwe otu ego na ego pere mpe. AUD / USD bụ ezigbo ihe atụ nke obere ụzọ. Dollar US na-anọchite ego ndị bụ isi nke ụzọ abụọ ahụ, ebe dollar Australia bụ ego na-enweghị ego.
Agbanyeghị na ụmụaka ka na-erite uru site na mmiri dị oke mkpa, mgbasa na-adịkarị oke karịa ndị isi. Nke a pụtara na azụmaahịa obere ụmụaka dị oke ọnụ na ogologo oge. Na nke ahụ kwuru, volatility dị ntakịrị karịa na obere ụzọ abụọ, yabụ enwere ohere iji nwekwuo nnukwu uru.
Currencygwọ ego na osisi ga-agụnye ego na-apụta na isi ego. Nke a nwere ike ịgụnye dollar US na Vietnamese dong, ma ọ bụ paụnd na-atụ egwu megide lira Turkish.
Kedu ụzọ ọ bụla, ụzọ abụọ dị iche iche nwere ike ịdị na-agbanwe oke, mgbasa na-adịkarị obosara. Nke a bụ ihe mere ị ga - eji zere ihe ndị ahụ ruo mgbe ị mụtara ịzụ ahịa na ọkwa dị elu.
Kedu otu ahia ahia Forex si arụ ọrụ?
Ozugbo ị họrọla otu ụzọ ego ga-ewe gị mma, ịkwesịrị ịchọpụta ụzọ ahịa ga-esi aga. Tupu anyị abanye na isi, ọ dị mkpa ịkọwa ihe dị iche n'etiti 'ịzụta' na 'ree' iji dabere na azụmaahịa azụmaahịa.
🥇 Ọ bụrụ na ị kwenyere na ego ahụ dị na ekpe-aka-ekpe nke ụzọ na-aga dịkwuo na uru, mgbe ahụ ịkwesịrị idowe a izu iji.
🥇 Ọ bụrụ na ị kwenyere na ego ahụ dị na aka nri nke ụzọ na-aga dịkwuo na uru, mgbe ahụ ịkwesịrị idowe a ere ịtụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere GBP / USD. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka GBP nwere ike ịbawanye uru karịa USD, mgbe ahụ anyị ga-etinye iwu ịzụta. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na i chere na USD ga-abawanye megide GBP, ị ga-etinye ka a na-ere iji.
Ihe Nlereanya nke 'Buy' Iwu na Forex Trading
N'ịnọgide na isiokwu GBP / USD, ka 'kwuo na ị debere' '500' ịzụta '. Nke a pụtara na ị kwenyere na GBP ga-abawanye na ọnụego megide USD.
Ọnụ ego GBP / USD bụ ugbu a 1.32
I tinyere ihe iji zụta £ 500
GBP / USD na-abawanye ruo 1.34, nke pụtara na GBP na-esiwanye ike megide USD
Nke a na - anọchite anya mmụba nke 1.51%
Uru gị ga-abụ £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Ihe Nlereanya nke 'Sell' Order na Forex Trading
N'ihe atụ a, anyị ga-arapara na GBP / USD. Naanị oge a, anyị ga-etinye iwu 'ree' ya. Nke a pụtara na ị kwenyere na USD ga-akarị GBP.
Placedtọre ihe ruru £ 1,500
GBP / USD na-agbada na 1.29, nke pụtara na USD na-esiwanye ike megide GBP
Nke a na-anọchite anya mbelata nke 2.27%
Uru gị ga-abụ £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Mụta ahia CFDs
Akụkụ nke abụọ nke oghere azụmahịa n'ịntanetị bụ nke CFDs. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ndị CFD na-enye gị ohere ịzụta ma ree ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụnụba ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche. Nke a bụ n'ihi na ịchọghị ka ị nweta ma ọ bụ chekwaa akụ sitere na itinye ego na ya.
Kama nke ahụ, CFDs na-agbaso ọnụ ahịa ụwa n'ezie nke ihe onwunwe a na-ekwu. Dịka, CFDs dị mma maka ịnweta ahịa nke ga-esiri ndị ọzọ ike iru.
N’okpuru ebe a, anyị edepụtala klasị akụ na ụba ndị CFD na-ekpuchi.
Cks Ahịa na Ahịa
✔️ Ngwá Ike
Kedu otu ahia CFD si arụ ọrụ?
N'ihe banyere otu CFD ahia si arụ ọrụ, nke a dị ka ịzụ na ire ahịa ụzọ abụọ. Isi ihe dị iche na mkpa ka ị maara nke a ogbo bụ teminoloji. Mgbe anyị na Forex, anyị na-ekpebi azụmaahịa dịka ịzụta ma ọ bụ ire ahịa, na oghere CFD anyị na-eji okwu 'ogologo' na 'mkpụmkpụ'.
Ọzọkwa, ndị CFD anaghị abịa ụzọ abụọ. Kama nke ahụ, ị ​​na-azụ ahịa maka akụ ụwa maka ọnụ ahịa ụwa, nke na-abụkarị dollar US. Dịka ọmụmaatụ, ma ị na-ere CFDs n'ụdị ebuka, mmanụ, gas, ma ọ bụ ọla edo - akụ na-adịkarị ọnụ ahịa karịa USD.
🥇 Ọ bụrụ na ị kwenyere na akụ ahụ ga-aga dịkwuo na uru, mgbe ahụ ịkwesịrị idowe a ogologo iwu.
🥇 Ọ bụrụ na ị kwenyere na akụ ahụ ga-aga ọnụ na uru, mgbe ahụ ịkwesịrị idowe a obere iwu.
Nke a bụ otu akụkụ mara mma nke ịzụ ahịa CFDs, ebe ọ bụ na ị ga-enwe nhọrọ nke ire ere n'oge na-adịghị anya. Nke a bụ ebe ị na-atụgharị uche n'ihe bara uru bara uru. Nke a bụ ihe ga - esi ike ịmegharị na oghere itinye ego na ọdịnala dịka ndị ahịa azụmaahịa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa ebuka na ogologo oge, mgbe ahụ, ị ​​ga-akacha mma ịzụta ego ị họọrọ site n'aka ndị ahịa ahịa. Nke a bụ n'ihi na ị ga-enweta ebuka kpamkpam, nke pụtara na ị ga-adịkarị ọtụtụ nchebe nke ndị na-etinye ego.
N'ụzọ dị oke mkpa, nke a gụnyere ikike iwu kwadoro ịkwụ ụgwọ nkenke ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ na-ekesa - dabere na ọnụọgụ mbak ị na-ejide.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụ azụmaahịa na obere oge, ị ga-eji nyiwe CFD. Nke a bụ n'ihi na ụgwọ ndị metụtara ịzụ na ire ebuka n'echiche ọdịnala dị elu karịa CFDs. Ọzọkwa - dị ka ndị ahịa na-ere ahịa, ị ga-enwe obere, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ohere ị ga-enwe ike ịre ere ngwa ahịa ị họọrọ. Ọzọkwa, nke a bụ ihe enyere site na ihe niile nyiwe CFD.
Ka o sina dị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ahịa ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ n'ịntanetị, ị ga-enwe nhọrọ abụọ - ịzụrụ na ire mbak n'otu n'otu, ma ọ bụ itinye ego na ndeksi.
Na-ere Ahịa Nke Onye
Ọ bụrụ n’inwere ikike achọrọ iji tinye ego na ụlọ ọrụ ọ bụla, ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ puku CFD equities. Nke a gụnyere ụlọ ọrụ ndị na-acha anụnụ anụnụ ndị edepụtara na ahịa ndị ama ama dịka NASDAQ na London Stock Exchange, yana obere ụlọ ọrụ okpu.
Ọ bụrụ n'ịhọrọ ụzọ CFD, uru nke mbak ị họọrọ ga-adị ka nke ọnụahịa nke ụwa-ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa nke ụtaba nke ụtaba ndị Britain na-arị elu site na 2.3% na oge 24, oge CFD dị iche iche ga-ejikwa 2.3% mụbaa.
✔️ Na-ahia Ahịa Ahịa Ahịa
Y’oburu n’inwe ahia igbanwe ngwa ahia na mbak, mana onweghi ihe omuma a choro ka i hoputa ulo oru obula, opuru ibu ihe itughari onu ahia.
A na-akpọkwa '' indices '', ndepụta ọnụahịa ndị na-azụ ahịa na-enye gị ohere ịkọ ọtụtụ narị ụlọ ọrụ n'otu azụmaahịa - na-emezigharị ọnọdụ gị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, site na itinye ego na S & P 500, ịnwere ike ịzụta mbak site na 500 nke ụlọ ọrụ ndị edepụtara edepụtara na US. N'otu aka ahụ, akara ngosi FTSE 100 na-enye gị ohere itinye ego na ụlọ ọrụ 100 kachasị elu edepụtara na London Stock Exchange.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndekpọ ọnụahịa nke ngwaahịa n'ụdị CFD, ị ga-enwe nhọrọ nke ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ. Dịka, ị ga-enwe ohere ị nweta uru ọbụlagodi mgbe ahịa ahịa buru ibu na-ada.
Gịnị bụ mgbasa?
N'agbanyeghi ma ị na-ere ahịa Forex ma ọ bụ CFDs - ịkwesịrị inwe nghọta siri ike banyere mgbasa. Na ụdị ya kachasị mkpa, nke a bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na ọnụahịa 'ree'. N'elu ụlọ ọrụ ịzụ ahịa, mgbasa ahụ na-eme ka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nweta ego.
Ogologo mgbasa a dị gị mkpa dị ka onye ahịa, ebe ọ na-egosi ụdị ụgwọ ị na-akwụghị ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọdịiche dị 0.5% na mgbasa mgbe ị na-azụ ahịa ebuka, nke a pụtara na ịkwesịrị ịme opekata mpe 0.5% na uru naanị imebi.
Ihe Nlereanya nke Gbasaa na CFDs
Thezọ kachasị mfe iji gbakọọ mgbasa ahụ mgbe ị na-ere CFDs bụ naanị ị rụpụta ọdịiche pasent dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire.
Na-achọ ịga 'ogologo' na mmanụ
Gị ore ahia awade a 'Buy' price nke $ 71
Ọnụ 'ere' bụ $ 69
Nke a pụtara na mgbasa bụ ihe dị iche na $ 69 na $ 71
Na pasent okwu, nke a bụ mgbasa nke 2.89%
Na agbanyeghị ma ị kpebiri ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na mmanụ, ị ga-akwụ ụgwọ mgbasa nke 2.89%. Nke a pụtara na ị ga-eme opekata mpe 2.89% maka uru naanị imebi.
🥇 Ọ bụrụ na ị gawa ogologo na mmanụ, ị ga-akwụ ụgwọ $ 71. Ọ bụrụ n ’ịpụ n’ọnọdụ gị ozigbo, ị ga - eme ya n’ọnọdụ ire ere $ 69. Dị ka ndị dị otú a, ịchọrọ ego mmanụ dịkwuo by 2.89% naanị imebi ọbụna.
🥇 Ọ bụrụ na ị gawa obere na mmanụ, ị ga-akwụ ụgwọ $ 69. Ọ bụrụ na ịpụ ozugbo n'ọnọdụ gị, ị ga-eme ya na ọnụ ahịa ịzụrụ $ 71. Dị ka ndị dị otú a, ịchọrọ ego mmanụ ọnụ by 2.89% naanị imebi ọbụna.
Gịnị bụ leverage?
Leverage bụ ma ihe na-atọ ụtọ ma dị oke egwu nke ị ga - ahụ n'ọtụtụ saịtị ntanetị n'ịntanetị. Na nkenke, leverage na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ọkwa dị elu karịa ihe ị nwere na akaụntụ azụmaahịa gị. Ejiri ihe dị ka 2: 1, 5: 1, ma ọ bụ 30: 1 kpebie ego a kapịrị ọnụ. Ihe dị elu karịa, otu ahụ ka ị na-azụ ahịa yana otu a - uru gị ma ọ bụ mfu gị ga-adị elu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị nwere naanị £ 300 na akaụntụ gị. Chọrọ ịga ogologo na gas nkịtị, ebe ọ bụ na ị na-eche na akụ dị ala nke ukwuu. Dịka, itinye ntinye nke 10: 1, nke pụtara na ị na-ere ahịa na £ 3,000.
N'ihe atụ a, £ 300 gị bụ oke ugbu a. Ọ bụrụ na uru ahịa gị gbadara site na 10: 1 (100/10 = 10%), ị ga-atụfu oke gị niile. A maara nke a dị ka 'mmiri mmiri'. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na oke gị bụ £ 300 ma ị na-azụ ahịa na 25: 1, ị ga-enweta mmiri ma ọ bụrụ na akụ ahụ gbadaa site na 25: 1 (100/25 = 4%).
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa azụmaahịa dị na UK (ma ọ bụ obodo ọ bụla nọ na Europe maka nke ahụ), ị ga-enweta ikike mmeghe nke European Securities and Markets Authority (ESMA) arụnyere.
ESMA Leverage Oke
30: 1 maka isi Forex ụzọ abụọ
20: 1 maka na-abụghị isi Forex ụzọ abụọ, gold, na isi indices
10: 1 maka ngwaahịa ndị ọzọ na-abụghị ọla edo na ndị na-abụghị isi hara nhatanha indices
5: 1 n'ihi na onye ebuka
2: 1 maka cryptocurrencies
Iwu ahia: Gini ka ha bu na otu ha si aru oru?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụ azụmaahịa n'ịntanetị, ọ dị ezigbo mkpa na ịmara etu iwu ahịa si arụ ọrụ. N'ụzọ bụ isi, nke a ga-enye gị ohere ịmechi azụmaahịa na-akpaghị aka mgbe a kụrụ ụfọdụ ọnụahịa ọnụahịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na azụmahịa na-amasị gị, ịnwere ike ịkwado uru site na imechi azụmaahịa ahụ na akpaghị aka. Simiaillly, ọ bụrụ na azụmahịa na-emegide gị, usoro ahịa nwere ike ịpụ na ahia ma si otú a - belata nfu gị.
N'okpuru ebe anyị edepụtara ụfọdụ iwu ahịa kachasị mkpa ịkwesịrị ịme banyere.
Dị ka aha ahụ na-egosi, usoro nkwụsị na-akwụsị ga-eme ka mgbasa ozi gị niile belata. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-atụgharị uche na Bitcoin, ị mepee azụmahịa ruru £ 2,000 na ọnụahịa izu $ 9,500.
Dị ka nke a, ị nwere olile anya na ọnụego Bitcoin na-abawanye. Agbanyeghị, ị na-etinye iwu nkwụsị-ọ bụrụ naanị na ihe emegide gị. Dịka ị chọghị ida karịa 5% nke uru azụmaahịa gị, ị na-etinye iwu nkwụsị-efu na $ 9,025.
Naanị ụbọchị ole na ole ka e mesịrị, Bitcoin na-ebu mmanụ ma tụfuo 20% na uru. Na mbu, ị gaara efu lost 400 (20% nke azụmahịa £ 2,000 gị). Agbanyeghị, ka ijiri nkwụnye ego ezi uche dị na $ 9,025, ị belata ọghọm gị naanị £ 100 (5% nke £ 2,000).
✔️ Na-ekwe nkwa Kwụsị-Loss Order
Dị ka ihe dị irè dị ka iwu nkwụsị na-efu, ọ nweghị nkwa ọ bụla na iwu gị ga-ejupụta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na itinye iwu nkwụsị na GBP / USD n'oge nsonaazụ referendum Brexit, ọ ga-abụ na iwu ahụ agaghị achọta onye zụrụ ahịa. Nke a bụ n'ihi na GBP / USD gafere oge oke volatility.
N’aka ozo, ‘ihe ekwesiri ime’ na ikwesiri itufu ihe gha abia, dika odi nkwekoro n’etiti gi na onye ahia gi. Rịba ama, ị ga-akwụ ụgwọ dị elu iji kwụọ ụgwọ ịkwụsị ụgwọ ọ bụla, n'agbanyeghị, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ.
Were -Profit Order
Ọ bụ ezie na ọ dị oke mkpa iji kpuchido ahia gị ka ị ghara ịkarị oke ọghọm, ịkwesịrị ịtọ iwu iji mechie azụmahịa na-akpaghị aka mgbe ị nwetara uru. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịhapụ ohere ị ga-emechi mkpọchi ma ọ bụrụ na ịnọghị na desktọpụ gị. Dị ka ndị dị otú a, iwu na-enweta uru ga-emechi azụmahịa na ọnụahịa akọwapụtara tupu oge eruo.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere ọlaọcha na $ 18.24, ma ịchọrọ ịgbachi-na uru mgbe ngwongwo na-abawanye site na 10%, ị nwere ike ịnye iwu iji nweta uru na $ 20.06. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ ruru $ 20.06, ahia ahụ ga-emechi na akpaghị aka site na uru nke 10%.
Ọfịs 1/2373, Ọkwa G, Ụlọ kwantum, 75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120, Malta
Nọmba ụlọ ọrụ edebanyere aha: 11746374
Nweta VIP SignalsNkwụnye ego $ 50 iji nweta ihe nrịba ama VIP n'efu maka 1 Afọ! Ahịa na MT4 na ntinye ego ruo 1: 500!